युवतीको यौ/न सम्बन्ध छ/छैन पत्ता लगाउने यस्ता छन् पाँच तरीका…. – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/युवतीको यौ/न सम्बन्ध छ/छैन पत्ता लगाउने यस्ता छन् पाँच तरीका….
काठमाडौं । यौ/न जीवन कुनै पनि सम्बन्धमा ठूलो बदलाव भएर आउँछ। इमोसनका साथै जोडीबीचको सम्बन्धलाई समेत प्रभावित पार्छ।तर,यसको असर यसैमा अन्त्य हुँदैन। यौ/न सम्बन्ध सुरु गरेपछि युवतीहरूको शरीरमा केही परिवर्तन देखिन्छ।
से/क्स पछि पुरुषको तुलनामा महिलाको शरीरमा अक्सिटोसिन र डोपामाइन हर्मोन उत्पादन हुन्छ।यसले महिलाको इमोसनका साथै व्यवहारमा पनि परिवर्तन आउँछ। यो असर केही समयका लागि नभएर विस्तारै विस्तारै व्यक्तित्वमा समेत असर पार्छ।
यौ/न सम्बन्धको सुरुवातपछि महिलाहरू आफ्नो शरीरलाई लिएर आत्मविश्वास पनि बढ्छ। यौ/न साथीले महिलाका हरेक कुरालाई प्रेम गरेमा महिलामा बढी आत्मविश्वास पैदा हुन्छ।
स्त/नको फर्म र आकार
यौ/न सम्बन्धपछि महिलाको स्तनको आकार बढ्न थाल्छ। यस्तो हर्मोनमा आउने परिवर्तनका कारण हुन्छ। तर, सबैमा यस्तो हुन्छ भन्ने होइन।यौ/न सम्बन्धका क्रममा स्तनले निश्चित आकार र स्थान लिन्छ। तर, यो क्रम सधैँका लागि नभएर यौ/न सम्बन्धपछि मानसिक परिवर्तन भएसँगै यो हराउँछ।
यौ/न क्रियाकलापको सुरुवातपछि महिलाले यो/नीमा परिवर्तन भएको महसुस गर्छन्। यौ/न सम्बन्धका कारण हुने बडी रियाक्सनका कारण यस्तो हुन्छ। यही कारण यौ/न सम्बन्धपछि यो/नीको आकार बढ्छ।
यौ/न सम्बन्धको सुरुवातपछि जोडीहरूको सम्बन्धमा नयाँ सुरुवात हुन्छ र नयाँ चरणमा प्रवेश गर्छन्।यसको असर खासगरी महिलामा बढी पर्छ। किनकि महिलाका लागि यौ/न सम्बन्धले अलग अर्थ राख्दछ।त्यसैले यौ/न सम्बन्धमा प्रवेश गरेका महिलाहरू आफ्नो यौ/न साथीको विषयमा भावनात्मक रूपमा बढी संवेदनशील बन्छन्।